Idi Banyere Anyị - Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.
Akụkụ CNC Machining
Igwe eji arụ ọrụ Alminum CNC
Igwe igwe CNC igwe
Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd. e hiwere na June 2002, na-adabere na qianrunshun igwe esenidụt ahịa ngalaba.Ọ dị na Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.Ọ bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke nwere ikike zuru oke na nhazi akụkụ akụrụngwa nkenke, imewe ihe nrụpụta, mmepe na mmepụta, yana imepụta na mmepe nke radiator.Ya isi mmepụta usoro na-agụnye CNC nkenke machining, CNC lathe nhazi, na Stamping akpụ, riveting, mgbakọ, wdg ngwaahịa na-agụnye: ọgwụ akụrụngwa akụkụ nhazi, nkwurịta okwu akụrụngwa akụkụ nhazi, ụgbọala akụkụ nhazi, agha ngwaahịa nhazi, njikọ akụkụ nhazi, radiator. nhazi modul na mpaghara ndị ọzọ.
Site na ọrụ dị elu na aha ọma, Wally na-etolite n'ike n'ike na ụlọ ọrụ nrụpụta nkenke CNC.Ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka ọ dịkwuo mma na nhazi akụkụ ndị na-abụghị ọkọlọtọ, kamakwa ọ na-enwe ọganihu dị ukwuu na nhazi modul nkenke, nhazi ngwaahịa radiator, nhazi nhazi nkenke, wdg, na-enye ndị ahịa ọrụ agbakwunyere ọnụ ahịa iji mezue ịzụrụ otu nkwụsị.
Anyị na-agbaso ụkpụrụ nke inye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma na ndabere nke ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.Anyị na-achịkwa àgwà ngwaahịa ahụ site na ijikọta "mgbochi" na "nyocha", na-enye teknụzụ njikwa mma dị mma na nke a pụrụ ịdabere na ya maka mmepụta, na-ebuga CNC nkenke machining, nkedo nkenke na nhazi stamping, ma mezue nnyefe gị.
Mmụta na ọzụzụ bụ ụzọ kacha mma iji hụ na mmepụta nke talent.Anyị na-enwe nzukọ ọmụmụ ihe dị mma na nzukọ mmụta dị mma iji kwalite nka ọkachamara nke ndị ọrụ dị mma, mara teknụzụ kachasị ọhụrụ na izute nka chọrọ nke ọkwa dị iche iche.
Àgwà ọma bụ àgwà ọma, àgwà ọma bụ ịchụ Wally dị ka mgbe niile!
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Dongguan Voerly Machinery Technology Co., Ltd.